सुंदरता उद्योग अल्ट्रासोनिक छालहरू प्रयोग cosmetology मा एक विशाल सफलता भएको छ। अल्ट्रासोनिक SMAS-उठाने - त्यसैले हालै देखा जो विशाल लोकप्रियता वृद्ध छाला संग काम गर्ने एक नयाँ तरिका जित्यो। यो विधि को समीक्षा आफ्नो उच्च प्रदर्शन र ग्राहक सन्तुष्टि भन्छन्।
किन कायाकल्प लागि यति लोकप्रिय सेवाहरू
संरक्षण इच्छा युवा गर्न - यो फेशन सनक छैन। बरु, यो एक क्लासिक छ। छैन छ? शताब्दीयौंदेखि, मान्छे, विशेष गरी महिला, trepidation संग को लागि आफ्नो अनुहार र शरीर व्यवहार गर्छन्। तिनीहरूले सधैं उमेर बढन प्रक्रिया ढिलाइ गर्न युवा वा दशक हुनेछ।
महिला खातिर हामी ट्वीक्स र सिकार धेरै लागि तयार थिए: यस्तो तिनीहरूले आज र भोलि हुनेछ। आधारभूत कस्मेटिक्स देखि प्लास्टिक सर्जरी गर्न: तर अब अग्रिम उमेर को बाहिरी संकेत लड्न सक्ने क्षमता बढेको छ। र यी अवसर विशाल माग प्रतिक्रिया विकसित जारी।
को SMAS-उठाने लिनुहोस्। यो विधि बारे समीक्षा र यसको परिणाम indifferent छोड्न सक्नुहुन्न महिला कुनै पनि। तर, दुर्भाग्य, केही contraindications हुन सक्छ वा धेरै भारी मूल्य हुनेछ। प्रक्रिया यस्तो को जस्तो देखिने सिद्ध harmlessness बावजुद जनसंख्याको थोरै प्रतिशत अझै पनि contraindications छ। तर तिनीहरूलाई धेरै, अनिरंतर मात्र awhile लागि प्रक्रिया को संभावना स्थगित जो छन्। तर थप कि पछि। गरेको कायाकल्प अनुहार को यो विधि एउटा परिचय सुरु गरौँ।
अल्ट्रासोनिक SMAS-उठाने के हो
महिला वृद्ध र वृद्ध छाला संग खुसी बनाउने सम्पत्ति छ जो प्रक्रिया। सर्जरी देखि exempting को विधि - यो अल्ट्रासोनिक SMAS-उठाने छ। उहाँको बारेमा प्रतिक्रियाहरू तरिका, सन्तुष्ट ग्राहकहरु धन्यवाद विभिन्न उड।
यो विधि bloodless र उच्च तीव्रता संग केन्द्रित अल्ट्रासाउंड प्रयोग अनुहार को कायाकल्प कस छ। यसलाई महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि मांसपेशी तन्तु र क्युटेनियस बोसो को स्तर मा छाला वृद्ध काम यस तरिका - कायाकल्प सबै ज्ञात भिन्न को safest, सबै भन्दा विश्वसनीय को एक र नाटकीय।
हार्डवेयर cosmetology लामो पहिले विकास गरे। तर यसको मुख्य समस्या प्रभाव गहिराई को कमी थियो। यो र मांसपेशी तन्तु प्रभावित बिना गहिरो तहहरूमा मर्मज्ञ बिना छाला काम गर्न उद्देश्य थियो मात्र।
तर सबै छाला को परिचय अल्ट्रासाउंड छालहरू प्रयोग कस संग परिवर्तन भयो। यसको प्रत्यक्ष र तत्काल कार्य - उनि बाहिरी aponeurotic मांसपेशी तह (SMAS) काम गर्न। यहाँ वाक्यांश बाहिरको Musculo-Aponeurotic प्रणाली, प्रक्रिया को नाम बनेको एक गरयो को अनुवाद हो।
शब्द "उठाने" लामो परिचित छ। यो छाला कस को प्रक्रिया बुझाउँछ। यो हुनत epidermis को तहहरू एक को नाम हो कि शब्द छ।
प्रक्रिया सञ्चालन fibromyshechnoy ऊतक anatomically को बीच स्थित छ जो जान्छ मा फैटी उपचर्म ऊतक र छाला, यसरी तीन तहहरू प्रयोग गर्दछ।
प्रक्रिया नै विशेष आवश्यकता गम्भीर ग्राहक प्रशिक्षण छैन। सबै आवश्यक छ - छ:
मेकअप रिमुभर, जो काम गर्न समस्या क्षेत्रमा अंकन पछि;
छाला नलिका भन्दा चिल्लो ग्लाइडिङ सुनिश्चित गर्न जेल लागू;
समस्या क्षेत्रहरु, कार्य नियन्त्रण व्यवहार;
को जेल सम्पर्क अवशेष हटाउन;
एक स्थानीय शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि लागू;
भावना ग्राहक द्वारा अनुभव कायाकल्प सामान्यतया सुखद समयमा। उपचार तपाईं अल्ट्रासोनिक ऊर्जा रूपमा न्यानो दलहन को पेशी तह कम छ कारण dermis मा गहिरो भित्र पस्नु गर्न लाग्छ। यो (केही अवस्थामा बाहेक) चोट छैन, तर तपाईं महसुस अलिकति आन्तरिक "फरफर" रिपोर्ट भने सबै काम गरिरहेको छ कि भनेर।
एकै समयमा आंशिक radiofrequency स्थान उत्तेजना मा कोलेजन फाइबर को उत्पादन, elastin उत्पादन को सक्रियता लागि यति महत्त्वपूर्ण बढ्छ। फलस्वरूप, यो छाला र सेल पुनर्जनन रूपमा transformational परिवर्तन गर्न जान्छ। र एक taut, जीवन्त, अधिक लोचदार छाला को प्रभाव लामो लिन।
एकै समयमा तपाईं महसुस हुनेछ कि कोमल गर्मी पनि, कायाकल्प को एक स्वस्थ, प्राकृतिक प्रक्रिया बढाउँछ नयाँ, ताजा कोलैजेन उत्पादन तपाईंको छाला उत्तेजक।
यसलाई त्यहाँ जो अझै पनि केही soreness अनुभव छ दुखाइ संवेदनशीलता, को एक धेरै कम सीमा संग विरामीहरु को एक सानो प्रतिशत छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ हुनत। त्यसैले, तपाईं मान्छे को यो प्रतिशत महसुस भने, तपाईं एक सानो ग्रस्त तयार हुनुपर्छ। यो पनि विद्यमान समस्याको बारेमा एक ब्यूटिशियन रोक्न सिफारिस गरिएको छ।
उपचार गरेपछि यो लायक थियो भन्ने महसुस हुनेछ। पछि सजिलै देखिने परिणाम तुरुन्तै दृश्यात्मक हुनेछ। तर यो केवल शुरुवात हो। र पछि लगभग दस दिन सामान्यतया आफ्नो उपस्थिति को आनन्द आउँछन्।
प्रजाति र SMAS-उठाने अल्ट्रासाउंड को प्रभाव
फलस्वरूप हामी चित्र कस्तो प्राप्त? यो केवल फिट छैन र निम्न स्तरका झुर्रियाँ बिना स्वस्थ छाला, तर पनि एउटा सुन्दर गोलो अनुहार, मध्यम nasolabial Folds, उच्चारण cheekbones, आँखा र अन्य कमजोरीहरू अन्तर्गत कुनै बैग sagging र सुनिंनु देखि।
कारण अल्ट्रासोनिक कायाकल्प को कार्यका लागि उच्च मांग गर्न, धेरै निर्माताहरु अल्ट्रासाउंड को मद्दतले SMAS facelift लागि उपयुक्त मशीनरी आफ्नै उत्पादन रुचि हो। र आज यो प्रक्रिया को लागि केहि ती छन्। यसको आफ्नै राम्रो प्रत्येक। के लिफ्ट उत्पादन को विधि - ग्राहक को लागि एक समाधान छ। तर सही विकल्प, उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू र आफ्नो गहिराई को उपस्थिति मा केन्द्रित गर्न, प्रस्तावित विधिहरू बीच मतभेद जान्नु आवश्यक छ।
SMAS HIFU र Doublo उठाने
एक चिरपरिचित प्रक्रिया अल्ट्रासाउंड HIFU SMAS-उठाने भनिन्छ। समीक्षा यस विधि को प्रभावकारिता बारे, बढ्दो लोकप्रियता भन्न र, फलस्वरूप। ग्राहक एक तत्काल facelift र जादुई परिवर्तन रिपोर्ट। Coagulation punctually, अल्ट्रासोनिक छालहरू को प्रभाव अन्तर्गत छाला र नरम Tissues को जडान तहहरू परिणामस्वरूप, सिलना जस्तै गरेको छ। प्रभाव को अवधि दुई वर्ष प्रत्याभूति गरिएको छ।
1.5 मिमी,3मिमी र 4.5 मिमि: HIFU यो dermis विभिन्न गहिराइमा मा सतह, मध्य र गहिरो दलहन प्रयोग संचालित, संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थापित गरिएको छ।
विधि पहिले नै उमेर परिवर्तनहरू पहिलो देखिने प्रकटीकरण, साथै जसको छाला शरीरको वजन एक तेज गिरावट भोगे छ ती मा मान्छे को लागि उपयुक्त छ (मृदु बन्न, एक बिट लिम्प फैलयो)।
कोरिया मा निर्मित पछि अल्ट्रासाउंड SMAS-उठाने Doublo प्रतिक्रियाहरू कुनै कम चापलूसी छ। यो सेवा को परिणाम उपचार प्रभाव पनि अघिल्लो एनालग भन्दा बढी उच्चारण भएपछि, अघिल्लो एक धेरै समान छ, तर नयाँ प्रविधिहरू र उच्च शक्ति धन्यवाद।
हामी यस्तो प्रक्रिया कुरा यदि SMAS-उठाने Doublo छ, आनन्द र कृतज्ञता समीक्षा पनि पुरानो उमेर कोटी देखि आउनुहोस्। उहाँले थप जटिल उमेर-सम्बन्धित समस्या सामना गर्न सक्षम छ देखि।
दुवै तरिका को परिणाम रूपरेखा चिउँडो चौरसाई को परिभाषा छ nasolabial Folds मध्यम निष्कासन नयाँ झुर्रियाँ र flews उदीयमान। प्रक्रिया पछि, औसत व्यक्ति, markedly क्षेत्र र थप expressive बन्न cheekbones उठ्नेछ अलिकति उच्च भएको निधारमा र eyebrows को छाला align। यो पनि scars हटाउन traceless ठूलो तरिका हो।
सामान्य मा, हामी Doublo र HIFU SMAS-उठाने भनिन्छ प्रक्रिया, एक रमणीय प्रभाव मा प्रसारण टिप्पणी बारे कुरा भने। तर वृद्ध लागि यो अझै पनि छाला कस अन्य सेवा अल्ट्रासोनिक विधिमा सिफारिस गरिएको छ।
गहिरो उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू उठाने
SMAS-उठाने समीक्षाएँ Ulthera रमणीय परिवर्तन प्रभावित जो समर्थकहरूको आफ्नो सर्कल, प्राप्त गर्दछ। परिणाम अनुसार, यो विधि शल्य facelift SMAS एउटा राम्रो वैकल्पिक सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक छालहरू यसको आवेदन प्रभाव मा कोलेजन फाइबर को सङ्कुचन हुन्छ। काटन, तिनीहरूले नयाँ elastin कक्षहरूको वृद्धि प्रोत्साहित।
अल्ट्रासोनिक "Alter" माथिको भन्दा छाला को तहहरूमा धेरै गहिरो penetrates। यो सतह, मध्य र उपचर्म ऊतक 3-8 मिमी मा मर्मज्ञ गहिरो दलहन को मद्दत काम गर्छ। एउटा यस्तो व्यापक दायरा र प्रभाव को गहिराई कारण यो चमत्कार काम गर्दछ। औसत दलहन5मिमी मार्फत भित्र पस्नु।
यो विधि संग, तपाईं डबल चिउँडो र sagging, तर पनि खोक्रो र गहिरो Folds, अनुहार वरिपरि झुर्रियाँ को उन्मूलन बिना गाला को मात्र सुन्दर आकृति प्राप्त हुनेछ। तपाईंको छाला उल्टो क्रममा एक वास्तविक उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू undergo हुनेछ। यो ताजा र फिट हुनेछ, आफ्नो eyebrows उठ्नेछ र सर्जरी बिना cosmetologists गर्न कठिन लड्न जो संग मुख को कुना, ओठ गएका विषमता दुर्भाग्यपूर्ण herniated कम पटल।
यो Ulthera प्रणाली उपकरण प्रयोग त मौलिक को "लिफ्ट" श्रेणी मा एफडीए अनुमोदन प्राप्त जो हार्डवेयर प्रविधि, को इतिहास मा पहिलो भए यसको कमीकमजोरी हटाइ द्वारा उपस्थिति परिवर्तन कि विश्वास छ। यो प्रक्रिया एक यात्रा एक ब्यूटिशियन आवश्यक र आधा देखि2घण्टा एक घण्टा रहन्छ। यो कुनै रिकभरी अवधि छ र पूर्ण गहिरो उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू र निराशा Saggy छाला संग copes।
रूपमा समर्थक-अल्ट्रासाउंड द्वारा SMAS facelift समीक्षा रिपोर्ट, अपेक्षित परिवर्तन लगभग तुरुन्त सजिलै देखिने हो, तर अर्को आधा वर्ष को अन्त्यमा अवलोकन वृद्धि को प्रभाव। तर परिणाम कम्तिमा दुई तीन वर्षसम्म जबर्जस्ती रहनेछ।
यो बेजोड लोकप्रियता SMAS-उठाने "Altera" प्रक्रिया वर्षा पछि मशरूम जस्तै प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गर्छ। तिनीहरूलाई बीच पाउन अचम्मको छैन धेरै चापलूसी छैनन्। शायद, उच्च लोकप्रियता को यो अपरिहार्य भाग नियम प्रमाणित कि अपवाद गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ।
कि उमेर मा सिफारिस गरिएको "Altera", प्रयोग गर्दा साँच्चै त्यहाँ लागि लड्न कुरा हो। ठीक लाइनहरु को लागि विधि पनि राम्रो छ, तर एक युवा उमेर मा, तपाईंले आफ्नो छाला सुधार र अन्य विधिहरू र कस्मेटिक्स विभिन्न प्रयोग उनको निवारक उपाय समय खर्च गर्न सक्छन्।
अल्ट्रासाउंड SMAS-उठाने को लोकप्रियता को लागि कारण
किन गैर-शल्य SMAS-उठाने समीक्षा कस को शल्य विधि भन्दा पनि अधिक उत्साहित हुन्छ? लगभग सबै तिनीहरूलाई मात्र सकारात्मक र धेरै सकारात्मक! महिला लगभग कुनै minuses छ, सही विधि आफै फेला पार्न पाउन।
यो bloodless, लगभग दर्दनाक विधि।
गुप्त विधि शल्य SMAS-उठाने भन्दा धेरै लाभ छ कि छ:
सामान्य एनेस्थेसिया प्रयोग बिना;
रोगी को विशेष तयारी छैन आवश्यक गर्छ, उपचार मात्र घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने आवश्यक छ;
scars को मौका traceless हटाउने;
अपवाद बिना कहीं शरीरमा प्रक्रिया, को संभावना;
रक्त वाहिकाओं प्रभावित कुनै तरिकामा कुनै खत, सजिलै देखिने सुनिंनु, bruising, छोड्छ;
कुनै उमेर सीमा;
को दृश्यग्रिड छाला को चिरस्थायी प्रभाव, यसको गहिरो तहहरू संग काम गर्न धन्यवाद;
appreciable प्रभाव समय मात्र बलियो साथ, लगभग तुरुन्तै आउँछ;
त्यहाँ मात्र अलग व्यक्तिगत अवस्थामा कुनै असुविधा छ रिकभरी अवधि, त्यहाँ अलिकति मांसपेशी soreness छ;
biorevitalisation, Microdermabrasion, आकृति प्लास्टिक, mesotherapy सहित अन्य कायाकल्प उपचार, संग संयोजन गर्ने क्षमता।
र यति धेरै लाभ संग, मूल कायाकल्प को अझै पनि आज एकदम जवान, तर अति प्रगतिशील बाटो धेरै प्रशंसक छ भन्ने तथ्यलाई केही आश्चर्यजनक छ। यो विधि को प्रभावकारिता बारेमा धेरै कुरा, यो SMAS-उठाने, यो बारेमा समीक्षाएँ। तिनीहरूले विभिन्न देशहरूमा र शहर बाट ग्राहक लेख्नुहोस्। र ग्राहक एकदम व्यापक उमेर सीमा छ।
छाला कस को अल्ट्रासोनिक विधि के प्राप्त गर्न सकिन्छ?
उपचार कस र घाँटी, चिबुक मा छाला उठाने, को चिउँडो अन्तर्गत र चिउँडो मा लागि आदर्श छ। तपाईं निधारमा, गाला र आँखा वरिपरि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त गर्नेछ। ठीक झुर्रियाँ को उपचार को लागि विधि र décolleté र शरीर मा sagging।
यो पनि ठूलो pores कम र मुखासे र मुखासे व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ! को यो शल्य विधि suspenders गर्न सक्छन्?
यो एक प्राकृतिक बाह्य परिवर्तनहरू किनभने अरू के, उल्लेख गर्नुपर्छ। surgically उठाने एकदम अनुहार सुविधाहरू बदल भने, डाटा, प्रकृति छाला अल्ट्रासाउंड प्रयोग अझै धेरै वर्ष को लागि "बन्द हावा" समय, कस पूर्व, तरुण उपस्थिति तपाईं फिर्ता।
यसरी, अल्ट्रासाउंड को SMAS-उठाने सम्मिलित भइरहेको, cosmetology मा एक विशाल सफलता बनाएको छ। यो विधि बारे समीक्षा विशिष्ट अवस्थामा बारेमा भन्नेछु। तपाईं rejuvenate यो मौकाको फाइदा लिन निर्णय भने, धेरै सूचनात्मक छ।
अल्ट्रासाउंड SMAS-उठाने को साइड इफेक्ट बारेमा
वास्तवमा, कुनै गम्भीर साइड इफेक्ट अवलोकन गरेका थिए। केही अवस्थामा, प्रक्रिया पछि ग्राहकबाट SMAS-उठाने समीक्षा केही दिन भित्र छाला को सानो सुनिंनु को उजुरी प्रक्रिया पछि, समावेश एक फोहर मांसपेशी दुखाइ। तर यी समस्या व्यक्तिगत आधारमा सबै उठ्छन् छैन। साथै, तिनीहरूले थोरै छन् र केही दिन भन्दा बढी समय टिक्न छैन।
सामान्य मा, हामी कायाकल्प सबै प्रकारका कुरा भने, विकल्प SMAS-उठाने पर्छ। समीक्षा, फोटो र प्रक्रिया को लागि उच्च मांग यी विधिहरू मा, धेरै लाभ हो भनेर संकेत गर्छ। प्रक्रियाहरु को उच्च लागत (110 देखि 210 हजार गर्न। RUB।) को लागि, ह्यान्डलिङ मा कमी र छैन भने।
तर वास्तवमा, एक महिलाको अनुहार काम सुधारना र तरोताजा यो साँच्चै उच्च कला गर्न akin छ। यसबाहेक, यो एक धेरै ठूलो जिम्मेवारी हो। र पनि यस्तो संवेदनशील मुद्दा महिला को इच्छा पूरा गर्न सहमत, यो आफ्नो क्षेत्रमा एक पेशेवर हुन आवश्यक छ। राम्रो काम विशेषज्ञ भुक्तानी सराहना गर्नुपर्छ।
प्रक्रियाहरु को प्रयोग को लागि एक contraindication बारेमा
यो कुनै प्रतिकूल प्रभाव र ग्राहक को स्वास्थ्य स्थिति सम्बन्धित यसको आचरण मा प्रतिबंध लागि स्पष्ट कारण छ, प्रक्रिया सुरक्षित मानिन्छ कि जस्तो थियो। तर, दुर्भाग्य, यस्तो प्रतिबन्ध एक निश्चित सूची अवस्थित र एक विशेषज्ञ भ्रमण गर्ने निर्णय अघि यसको बारेमा जान्नु आवश्यक छ।
गर्भावस्था र lactation अवधि।
कुनै पनि प्रकारको मधुमेह।
धातु प्रत्यारोपण र pacemakers को उपस्थिति, दन्त crowns र सुन सूत्रहरू को अपवाद संग।
गंभीर स्नायविक विकारहरु, मिर्गी।
Dermatologic रोग समस्या क्षेत्रमा अनुवादित।
अनुहार मा छाला को भडकाऊ प्रक्रिया र उल्लंघन निष्ठा।
यो सानो सूची कुनै पनि देश को जनसंख्याको ठूलो भाग कवर। तपाईं होसियार हुनुपर्छ किन कि छ। तर त्यहाँ कुनै contraindications भने, र तपाईं शुल्क भ्रममा छैन, त्यसपछि त्यहाँ समय सर्जरी, सामान्य एनेस्थेसिया र स्वास्थ्य गर्न जोखिम बिना फिर्ता "उल्टा" एउटा ठूलो मौका हो। यो ऐनामा आफूलाई हेर्दा, आफ्नो छाला पराउँछु र उमेर बारेमा भूल गर्न सम्भव हुनेछ।
को SMAS-facelift भनिन्छ सेवा प्रयोग गर्नुहोस्। समीक्षा होनहार छन्। शानदार प्रभाव बारे आफ्नो छाप साझेदारी गर्न खुसी महिला। खडा र छाला गर्न युवा फर्कन एक चाखलाग्दा मौका रूपमा प्रयोग गरेर rejuvenated यी पार्टीहरू नजिक छन्।
"Yakuza" (टाटु): महत्व र फोटो
कसरी आफ्नो घर छोडेर बिना सेल्युलाईट लड्न?
विवाह आफ्नै हात बनाउन। सुझाव बनाउन-अप कलाकारहरूको अनुभव।
बिकनी लागि एपिलेटर। प्रकार र आफ्नो विशेषताहरु
माछा को tion। के चमत्कार-भोज?
रबर्ट Ley - पीएच.डी., Obergruppenfiihrer संविधानसभा, जर्मन श्रम मोर्चा नेतृत्व गर्ने
Kyurlevsky करियर: मनोरञ्जन र माछा मार्ने। अनुभवी माझिहरु को समीक्षा, फोटो
कसरी माटो बाट "Ingres berdz" बनाउने?
को नब्बे र शून्य को सबै भन्दा रक बैंड